Dagaal dhexmaray Ciidamada Badda Puntland iyo Burcad-badeed
Home Somali News Puntland Dagaal dhexmaray Ciidamada Badda Puntland iyo Burcad-badeed
Wararkii ugu danbeeyay ee ka’imaanaya deegaanka Garacad ee gobolka Mudug, ayaa sheegaya in dagaal qasaaro gaystay uu halkaas saacadihii ugu danbeeyay ku dhexmaray Ciidamada badda Puntland iyo kooxo burcad-badeed ah.
Markab ay soo afduubeen kooxdan burcad-badeeda ayaa lasheegay inuu kusoo caariyay meel waqooyiga uga beegan magaalada Garacad wuxuuna dhexda uga jiraa Qarar dhexdooda waxaana lagu tegi karaa oo kaliya doonyo maadaama meesha uu ku jiro aan ahayn xeeb banaan.
Ciidamada badda Puntland, ayaa lasheegay ineey rasaas aad uxoogan ku rideen markabka, saacado kadibna ay isku dayeen ineey fuulaan markabka waxayna qaateen laba ;Laash si ay markabka u fuulaan, laakiin koox burcad-badeeda katirsan ayaa waxay sugayeen ilaa ay ciidamada uga soo dhowaadaan dabadeedna waxay la beegsadeen rasaas iyo Baasuukayaasha garbaha laga rido, waxana halkaas ku basbeelay labadii laash ay Ciidamada wateen.
Markabkan oo lagu magacaabo MV ICEBERG 1 waxaa la afduubay bishii 29kii Maarso ee sanadkii 2010. Waxaa laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, wuxuuna sitay calanka dalka Panama. Waxaa markabkan saarna shaqaale badan oo isugu jira, 9 Yemeniyiin, 6 Hindi, 4 reer Ghana, 2 Sudaani ah, 2 Pakistani ah iyo hal qof oo u dhashay dalka Filibiin.
Shirkadda leh markabkaan ayaa kadhaga adeegtay ineey bixiso lacagta madaxfurashada ay dalbadeen kooxda haysata markabka, lacagtaas ayaa waxay gaareeysaa 10 milyan oo doolar.